निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दा जेल जानु पर्ने ? – www.janabato.com
२० मंसिर २०७५, बिहीबार ०९:५७ December 6, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
समाचार टिप्पणी । कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया निर्मला पन्तको हत्या भएको झण्डै ५ महिना पुरा हुन लागेको छ । देशमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि झण्डै ५५ जना छोरीचेलीहरुको बलात्कार भइसकेको छ । दुईतिहाई बाम र कम्युनिष्ट सरकारले अझै बलात्कारीलाई पक्राउ गर्नुको साटो निर्मला पन्तको परिवारको न्यायका लागी सडकमा निस्किएका आन्दोलनकारी माथि निर्मम दमन गरेको छ ।
यही बिषयलाई लिएर मंसिरका १६ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशैभर जनप्रदर्शन गर्यो । ओली सरकारले निर्मलाको हत्यारालाई संरक्षण गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बलात्कारीलाई आफ्नो पार्टीले कारबाही गर्ने घोषणा समेत गर्यो । बुटवलमा भएको जनप्रदर्शनको क्रममा नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज संगमले सिंगो देश आज निर्मला पन्तहरुको नियति भोग्नु परेको भन्दै बलात्कारीको संरक्षण राज्यले गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले निर्मला पन्तको न्यायका लागी पार्टीले जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए । केही महिनाअगाडी बुटवलका साहित्यकारहरुले ट्राफिक चोकदेखि पुष्पलाल पार्कसम्म हातमा कविताका प्ले कार्डहरुले लिएर मौन जुलुस निकाले । देशैभरि निर्मला पन्त लगायत बलात्कार तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध कविहरुले कविता वाचन गरिरहेका छन् । बुटवलमा नै महिला हिंसा विरुद्ध साहित्यिक अभियानले देविनगर स्थित चौपारीमा सडक कविता वाचन समेत गरेको थियो ।
बिहिवार निर्मला पन्तको न्यायका लागी प्रदर्शन गर्दा सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको गेट अगाडी प्रदर्शनमा उत्रेका उनीहरुमा प्रहरीले निर्मम दमन मात्रै गरेको छैन, शान्तिपूर्ण जुलुस र सभा गर्ने संवैधानिक अधिकारको समेत खिल्ली उडाएको छ । हातमा पोष्टर सहित जुलुसमा निस्किएका प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्दै १२ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । केही दिन अगाडी सडकका पोलहरुमा टाँसिएको निर्मला पन्तको फोटो सहितको पोष्टर प्रहरीले च्यातेको थियो ।
ओली–दाहाल सरकार निर्मलाको पन्तको न्यायको पक्षमा सडकमा उत्रिएका नेपाली जनतामा निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले फासिवादको अभ्यास गर्दैछ । दुईतिहाईको दम्भमा जनताको न्यायपूर्ण आवाज सुन्न समेत सरकार तयार भएको देखिन्न । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दुखदायी कुरा हो । के निर्मला पन्तहरु बलात्कारीको शिकार हुनुपर्ने हो ? के निर्मला पन्तको न्यायको पक्षमा बोल्दा जेल जानुपर्ने हो ? निर्मला पन्त लगायत हत्या र बलात्कार विरुद्ध मौन बस्नु पनि मृत्यु हो । लैंगिक हिंसा र बलात्कारी र यसको संरक्षणकर्ता विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट बोलौं ।
← एकीकृत जनक्रान्तिका पाँच आधार
बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा जबर्जस्ती घर भत्काइयो →
संसदीय चुनाव ठेकेदार र व्यापारीको कब्जामा, दुई दर्जन बढी ठेकेदार बने उम्मेदवार (सुची सहित)
२४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १४:५१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on संसदीय चुनाव ठेकेदार र व्यापारीको कब्जामा, दुई दर्जन बढी ठेकेदार बने उम्मेदवार (सुची सहित)
जिल्लामा शिक्षाको विकासको लागि सबै एक हुनुको विकल्प नरहेको प्रतिनिधिसभा सभासद रायमायझीको जोड
२५ भाद्र २०७५, सोमबार १३:३७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on जिल्लामा शिक्षाको विकासको लागि सबै एक हुनुको विकल्प नरहेको प्रतिनिधिसभा सभासद रायमायझीको जोड
राजनीतिको उदास मौसममा यस्तो छ बुटवलमा तिहारको चहलपहल
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार ११:०६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on राजनीतिको उदास मौसममा यस्तो छ बुटवलमा तिहारको चहलपहल